E-mail Marketing | SUNDEW MYANMAR
Posted on June 2, 2016 by Htoonlin
နိုင်ငံတကာ မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစု ဟာ ယခု ၂၁ ရာစုမှာ E-mail Marketing ကို အသုံးပြု လာကြပါပြီ။ E-mail Marketing ဆိုတာကတော့ သင့်လုပ်ငန်း သင့် ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို စားသုံးသူ တွေ သိရှိလာအောင် Marketing လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ၂၁ ရာစုမှာ လူတိုင်းနီးပါး ကိုယ်ပိုင် E-mail Account တွေ တည်ရှိပြီး စီးပွားရေး လူမှုရေး တွေမှာ ဆက်သွယ်ဖို့ အသုံး ပြုနေကြပါပြီ။ ဒီတော့ E-mail Marketing လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်း တွေ အကြောင်းကို စားသုံးသူ အများစုက အလွယ်တကူ သိရှိလာနိုင်ပြီး နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ စားသုံးသူ အချို့က လိုအပ်လျှင် အချိန်မရွေး ထုတ်ကြည့်လို့ ရအောင် သူ့တို့၏ Mail Box တွေ ထဲမှာ သင့် E-mail တွေကို သိမ်းဆည်း ထားကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို သင့်လုပ်ငန်း (သို့) သင့်ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို စားသုံးသူတွေ ဆီ E-mail ဘယ်လို ပို့်မလဲ?
ပထမ အချက် အနေဖြင့် သင့် လုပ်ငန်း (သို့) သင့် ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို တကယ်သိရှိလိုမယ့် စားသုံးသူတွေ့ ရဲ့ E-Mail List သင့်ဆီမှာ ရှိနေရပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ အချက် အနေဖြင့် သင့် လုပ်ငန်း (သို့) သင့် ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို လက်ခံရရှိ မယ်သူ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိစေမယ့် E-mail Template မျိုး ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ E-mail Template မသုံးပဲ ရိုးရိုး မေးလ်ပို့ ရင် မရဘူးလားဆိုတော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်လုပ်ငန်း ဘယ်လောက် ကြီးကျယ် ခမ်းနားတယ် ဆိုတာ သိဖို့ အတွက် First Impression ကအလွန် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါကို သင့်က ပုံမှန် E-mail တွေနဲ့ စားသုံးသူတွေဆီ ပို့မယ်ဆို သင့် လုပ်ငန်းကို စားသုံးသူက ဘယ်လို မြင်သွားမလဲ။
တတိယ အချက် အနေနဲ့ သင့်ဆီမှာ E-mail Service တစ်ခု ရှိရပါလိမ့်မယ်။
ကဲ သင့်ဆီမှာ မေးလ် ပို့ဖို့ အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တောင် ပို့လိုက်တယ် E-mail က စားသုံးသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆီကို ရောက်သွားလဲ ဆိုတာ သိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှာ သင့် Marketing Strategy က ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်တယ် ဆိုတာကို သင် တိုင်းတာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၅၄ သန်း ကျော်ရှိရာ ၂၆ သန်းမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်လည်း မြို့ပြ/ ကျေးလက် နိုင်ငံအနှံ့မှ စားသုံးသူများ မိမိလုပ်ငန်း (သို့) ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့ SUNDEW MYANMAR ရဲ့ E-mail Marketing Service Team ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်း(သို့) ကုန်ပစ္စည်း များအတွက် E-Mail Marketing နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အခမဲ့ အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊သင့်တင့် လျောက်ပတ်မည့် E-mail Template များရေးဆွဲပေးခြင်း၊ စျေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ E-Mail များကို ပို့ဆောင် ပေးခြင်း၊ E-Mail Report များ ထုတ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို အသင့်တော်ဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့် SUNDEW MYANMAR မှ One Stop Service ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
This entry was posted in General, News and tagged E-mail Marketing, E-mail Service, SUNDEW MYANMAR. Bookmark the permalink.
← Congratulation Proximity Design!
Welcome Phone Corner →
Categories Select Category General (10) News (6)
Get Well Soon K!
Welcome Open Hluttaw
Welcome Phone Corner
Congratulation Proximity Design!
Archives Select Month July 2016 (1) June 2016 (3) May 2016 (5) August 2012 (1)
No. 11 5th, Innwa Street, Tarmwe, Yangon, Myanmar.
+9594200 20 355
SUNDEW MYANMAR © 2011-2016
Thanks alot Zerif Lite